SAWIRO:- Madaxweynaha Soomaaliya oo warqadaha aqoonsiga ka guddoomay danjiraha Finland – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeArimaha BulshadaSAWIRO:- Madaxweynaha Soomaaliya oo warqadaha aqoonsiga ka guddoomay danjiraha Finland
SAWIRO:- Madaxweynaha Soomaaliya oo warqadaha aqoonsiga ka guddoomay danjiraha Finland
Hiiraan Xog, Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa maanta warqadaha aqoonsiga ka guddoomay danjiraha cusub ee Finland u soo dirsatay Soomaaliya Erik Lundberg.
Xoghayaha wasaaradda arrimaha dibadda dowladda Federaalka Soomaaliya Siciid Xaaji Maxamuud ayaa sheegay in madaxweynaha iyo danjiraha ay ka wada hadleen sidii loo dardar gelin lahaa iskaashiga iyo xiirirka ka dhexeeya labada dalka.
Safiirka dowladda Finland u fadhin doona Soomaaliya, Erik Lundberg ayaa uga mahadceliyey madaxweyanaha Soomaaliya sida wanaagsan ee uu uga guddoomay warqadahiisa aqoonsiga ee safiirnimo.
Danjiraha ayaa sheegay in dalkiisa ay muhiim u tahay joogtaynta xiriirka labada dal iyo inuu noqdo mid ku saleeysan iskaashi iyo xaqiijinta danaha labada shacab ee Finland iyo Soomaaliya.
Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan oo ka haray Doorashada
Dad shacab ah oo lagu dilay degaan ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe